Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Bulshada Soomaalida Ogadenya Qeybaheeda, Ayaa Isku Raacay Wax Farabadan Oo Wanaagsan Hadii La Fuliyo! By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Bulshada Soomaalida Ogadenya Qeybaheeda, Ayaa Isku Raacay Wax Farabadan Oo Wanaagsan Hadii La Fuliyo! By: Xaaji M/rashiid
Posted by Dayr	/ January 2, 2019
Tan iyo intuu isbadalku kadhacay Wadanka Ogadenya waxaa lagu jiraa is booqasho, wada tashi iyo soo dhaweynta dadkii qurbaha kasoo laabtay. Wax lagu tilmaami karo gargaar ilaahay ayaa kasocda dalkii hooyo. Kuwii dalka sii joogay waxay muujiyeen karti dheeraad ah markii laga fiiriyo dhanka soo dhaweynta iyo marti galiyada ay sameeyeen. Inkasta oo la dareemayo waxayeelada uu cadowgu ugaystay oo ay kamuuqdaan nabaradii la gaadhsiiyay hadana waxaan marnaba la qarin Karin farxadda wajiyadooda ka muuqata.
Madaxda JWXO ayaa dhex mukhuuranaya kulamo wax ku oola oo ay shacabka ugu qabanayaan magaalooyinka waawayn iyo hareerahooda. Nuxurka khudbadahoodu waxay ku wareegayaan in la xoojiyo Tiirka midnimada oo hadii la adkeeyo ayna dabayluhu ridi Karin. Madaxda JWXO waxay shir walba ku soo gunaanadayaan dardaaran culus oo Talooyin xambaarsan!. Dadku waxay u oomanyihiin aragtida madaxdii iyo xubnihii halgnaka ka waday qurbaha. Sidaa darteed ayayna jirin wax la qoonsado ama isku dhac ah oo shirarka lasoo darsa haba yaraatee.
Arimo badan oo wada wanaagsan ayay isku raaceen bulshada iyo hawlwadeenadu, waxaana kamid ah, In jabhadda lagu taageero hadafkeeda siyaasiga, In midnimada la quweeyo oo umada soomaaliyeed laga dhigo hal far ah. In umadaha geeska lagula noolaado daris wanaag, In nabadda qayb Libaax laga qaato Maamulka Degaankana garab loo noqdo ilaa inta uu wadada saxda ku taaganyahay. In Dadkii dhibanayaasha ahaa loo fidiyo gargaar iyo caawinaad. Intaa iyo kuwo kale oo wada quruxbadan ayaa la isku raacay, hadii siday tahay loo fuliyana horumar buuxa ayaa lagu naaloon doonaa.
Xaalku meel fiican uYUU marayaa waqtigan xaaliga ah, balse way jirtaa in dad soomaaliyeed oo xuduudo la leh Oromada iyo Canfarta ay dhibaato lasoo daristay, taasoo ah mid aan waqtigan loo baahayn inay sii socoto. Wadahadalku waa kan keenay guulaha waawayn iyo nabadda saameysay guud ahaan itoobiya ee dadka hadeer dagaalka u xiiso qaba maxaa ka qaldan! Si kastaba ha ahaatee waxaa la ogyahay inay umadda soomaaliyeed ee Gobolku kasoo daaleen dagaal iyo darxumo, sidaa darteed ayay mar walba xigsadaan dhanka nabadda.
Geesta kale waxay dalka iyo siyaasadiisu wajahayaan marxalad xasaasi ah oo ubaahan in la dhiso Buundo dheer oo lagu gudbo. Waa marxalad aan la fudeydsan Karin oo dhibkeeda iyo dheefteedaba wadata! Cid kasta oo dhaqanka itoobiya aqoon uleh way dareemi kartaa dhanka dabeyshu usocoto waqtigan lajoogo. Soomaalidu waxay tidhaaha Geel jire Geela wuu wada jirtaa, wuuna kala jirtaa oo micnaheedu yahay mid waliba hashiisa ilaalinteeda ayuu mudnaanta siiyaa, balse dusha waa la iska dugsadaa.
Ugu dambayn waxaan kula dardaarmi lahaa bushada geesiga ah ee soomaaliyeed guud ahaan, Gaar ahaana Taageerayaasha JWXO in la garab istaago wajigan cusub ee halganku galay.